कारागारमा हाँस्यव्यङ्ग्य शिविर, मनोज गजुरेलको प्रस्तुतिले केदी मख्ख ! – Everest Dainik – News from Nepal
कारागारमा हाँस्यव्यङ्ग्य शिविर, मनोज गजुरेलको प्रस्तुतिले केदी मख्ख !
झापा, असोज १५ । गर्मीको मौसम, त्यसमाथि तातो घाम । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दीका लागि कारागारको बसाई कष्टकर नहुने कुरै भएन तर आइतबार झापा कारागारका एक हजार २३ जना कैदीबन्दीले राष्ट्रिय कलाकार मनोज गजुरेलको प्रेरक प्रस्तुतिका कारण मनोरञ्जन मात्र होइन, शीतल पनि महसुस गरे ।
हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले काराबासको बसाइलाई निराशामा होइन, विगतका कमजोरी सच्याएर भविष्यमा नयाँ जीवन जिउने आशामा परिणत गर्न कैदीबन्दीलाई आग्रह गरे । उनले देशको ठूला पदमा पुगेका व्यक्तिसमेत जीवनको कुनै कालखण्डमा कारागारमा बसेको चर्चा गर्दै काराबासलाई विश्वविद्यालयसँग तुलना गरे ।
कार्यक्रममा कैदीका तर्फबाट रमेश पोखरेलले कविता प्रस्तुत गरिरहँदा अतिथि कलाकार गजुरेलसँगै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले ताली बजाएर प्रशैसा गरिरहे ।
विराटनगर कारागारपछि सिस्नोपानी नेपालले झापा कारागारमा यो कार्यक्रम गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ पनि अतिथि रहेका थिए ।
झापा कारागारमा हाल क्षमताभनदा तेब्बर एक हजार ३२ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारको क्षमता ३५० को मात्र रहेको कारागारका निमित्त प्रमुख पदमलाल ओझाले बताए । -रासस
ट्याग्स: jhapa, kaidi, Manoj Gajurel